“बदलिँदो परिस्थितिसँगै केरुङ–रसुवागढी अन्तराष्ट्रिय राजमार्गको महत्व पनि बढ्दैछ”, विश्वबन्धु थापा - दुनियाँको खबर
Home अन्तरवार्ता “बदलिँदो परिस्थितिसँगै केरुङ–रसुवागढी अन्तराष्ट्रिय राजमार्गको महत्व पनि बढ्दैछ”, विश्वबन्धु थापा
“बदलिँदो परिस्थितिसँगै केरुङ–रसुवागढी अन्तराष्ट्रिय राजमार्गको महत्व पनि बढ्दैछ”, विश्वबन्धु थापा
on: १० बैशाख २०७८, शुक्रबार ०९:०३
नेपालको भूराजनीतिक स्थितिलाई कसरी मुल्यांकन गर्नु भएको छ ?
नेपालको भूराजनीतिक स्थितिलाई बुझेर नै राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल ‘दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो’ भनेको हुनु पर्छ । तरुलको कोमलता, भूमिका र यसको विकास (सुरक्षा) का लागि चाहिने शान्त र सुरक्षित वातावरणको आवश्यकता पर्दछ । दुई ढुङ्गाको बीचमा अवस्थित तरुलको विस्तारित भाग दुई विशाल शक्तिशाली, सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तर र परस्परको राजनीतिमा भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण राख्ने देशहरुका माझमा अवस्थित छ । नेपालका दुई सँधियारहरुमध्ये कुनै एक सँधियार राष्ट्रसँग मात्र विशेष सम्बन्ध छैन, दुबै सँधियार राष्ट्रहरुसँग ‘असल’ र ‘समान’ सम्बन्ध छ भन्ने मेरो सैद्धान्तिक दृष्टिकोण छ । कुटनीतिकवृत्तमा यसलाई कतिपय कुटनीतिज्ञहरुले ‘तरुल कुटनीति’ पनि भन्ने गर्छन् । त्यसैगरी बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहकै ‘जाई कटक नगर्नू’ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण दिव्योपदेशले नेपालको भूराजनीतिक स्थिति सुन्दर, शान्त र प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रहेको बोध गराउँदछ । यसले ‘आक्रमणका विरुद्ध प्रत्याक्रमण हुन्छ’ भन्ने सुरक्षाको सिद्धान्तमाथि जोड् दिएको बुझिन्छ । नेपालको हिमश्रृङ्खला, पहाड, चुरे–भावरस्थित चारकोशे झाडी, यहाँका घना बन–जङ्गलहरु र तराइ (मधेश) का कारण समग्र एशियाली सभ्यता भित्रका मध्यएशिया तथा दक्षिण एशियाली दुई महान देशहरु चीन र भारतको छिमेकी नेपाल (नेपाली) सगरमाथाको उचाईमा छौं । यहीँको माटोमा जन्मेका बुद्धले भने “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” धम्म हो, सत्य यही हो । हिमालको स्थिरता, बुद्धको शान्ति र समभाव नेपाली राजनीतिक धर्म हो ।
तत्कालीन परिवेशको राजनीति र समाजनीतिका सवालमा यहाँले प्रत्यक्ष भोग्नु भएको व्यवहारिक अनुभव के कस्तो रह्यो ?
वर्तमान नेपाल आफ्नो छिमेकी राज्यहरुसँग गरेको सन्धीबाट प्रभावित छ, जुन बेला नेपाल एकीकरणकालमा थियो । त्यो बेला मित्रराष्ट्र भारतमा व्यापार गर्न आएका अंग्रेजले कलकत्ता क्षेत्रस्थित बंगालको गाउँबाट राज्य विस्तार गरेका हुन् । वृटिशको विस्तारवादी नीति विरुद्धको संघर्ष र यसको परिणाम ‘सुगौली सन्धी’ हो । ३ राज्यमा विभाजित काठमाण्डौ उपत्यकामा पृथ्वीनारायण शाह भन्दा पहिले वृटिश फौज पसेको भए नेपालमा एकीकरण सम्भव थिएन । यसकारण आजको नेपाल “साना दुःखले आज्र्याको होइन ।” गौतम बुद्धले भनेको “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” राजनीतिमा लागु गर्दा हामीलाई निर्वाचनबाट आउने सरकार नै प्राप्त हुने हो । अतः राजनीति एउटा धर्म हो । राजनीति समाज सेवा पनि हो । यसमा लागेकाले जनमतबाट शक्ति प्राप्त गर्दछन् । यस्तो शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भनेर शासकका लागि नीति–नियमहरु छन् । वि.सं. २०१७ पौष १ गतेको परिवर्तनको नामाकरण पछि भयो । तत्कालीन शाही घोषणामा पनि जनहित र सुखका लागि परिवर्तनको संकेत थियो । केही समयका लागि यस्तो परिवर्तन ५/७ वर्ष पछि आउने प्रजातन्त्रकै लागि हुन्छ भन्ने स्पष्ट भाव वि.सं. २०१८ वैशाख १ गतेको तत्कालीन शाही सम्बोधनमा थियो । तर यस बमोजिम नहुँदा मैले बारम्बार तीनवटै राजाहरुलाई सम्झना गराएँ । अन्ततः मैले अनुभव गरेँ– “प्रभुता पाईका मद नाहीः ।” अतः सत्ता पाएपछि कललाई घमण्ड हुँदैन ?
चीन–नेपाल–भारत त्रिदेशीय/त्रिपक्षीय राजनीतिक–आर्थिक परिवर्तनको प्रभावबीच नेपालमा चीनको भूमिका के कस्तो रहँदै आएको महशुस गर्नु भएको छ ?
राज्य भनेको एक स्वतन्त्र भू–भाग हो । तर यसलाई यातायातले जोडेको हुन्छ । यस हिमाली भू–भागमा बस्नेले पनि एउटा सीमा कोरेर नेपाल भने । यो सम्बन्ध जोड्ने माध्यम पहिले भूमिसँग सम्बन्धित थियो । आजको परिवर्तित समयमा आकाश र विद्युतीय समेत छन् । अतितमा मित्रराष्ट्र भारत सहज र मित्रराष्ट्र चीन दुर्गम रहेको महशुस हुन्थ्यो । राणा शासनको अन्त्यमा र शाहवंशको अन्त्यमा दक्षिणले बढी प्रभाव पारेको महशुस हुन्थ्यो । अव, त्यो छैन । नेपाल बढी सान्दर्भिक छ । कोदारी राजमार्गले नेपालमा पहिलो पटक ‘स्वतन्त्रताको दोस्रो मात्रा’ (सेकेण्ड डिग्री अफ फ्रिडम) दिएको छ । बदलिँदो परिस्थितिसँगै ‘केरुङ–रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग’ को महत्व पनि बढ्दैछ । जहाँसम्म चीनको प्रसङ्ग छ, नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अप्रिल २९, २०१९ मा हस्ताक्षर गरेको दुई देशीय ‘ट्रान्जिट प्रोटोकल’ बाट नेपालले चीनका ४ बन्दरगाह क्रमशः ‘तियान्जिन’, ‘सेन्जेन’, ‘लियान्युगाङ’ र ‘झ्याङजिङ’ तथा ३ सुख्खा बन्दरगाह ‘लान्जाओ’, ‘ल्हासा’ र ‘सिगात्से’ को प्रयोग गर्न सक्ने भूपरिवेष्ठित अधिकार प्राप्त गरेको छ । प्रस्तावित ‘केरुङ–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण कार्य’ अर्थात ‘उत्तर–दक्षिण विद्युतीय रेल सेवा’ उपभोगको सम्भावना नजिकिँदै छ । यसले वास्तवमा नेपाल र चीनलाई मात्र होइन, ‘चीन–नेपाल–भारत त्रिपक्षीयतावाद्को सिद्धान्त’ लाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । नेपालको विकास र समृद्धिका हरेक क्षेत्रमा मित्रराष्ट्र भारतको जस्तै मित्रराष्ट्र चीनको पनि परम्परागत कालदेखि नै मैत्रिपूर्ण सहयोग, सद्भाव रहँदै आएको छ ।
नेपालबाट वि.सं. २०२० सालतिर शांघाइमा प्रतिनिधि मण्डलको रुपमा गएका थियौं । त्यो बेला हामीलाई आकस्मिक रुपमा माओ त्सेतुंगसँग पनि भेट गराइएको थियो । त्यसक्रममा अध्यक्ष माओले मसँग यसरी तिब्बतसम्म रेल पु-याउने योजना रहेको विषय सुनाउनु भएको प्रसङ्गलाई स्मरण गर्न चाहन्छु l
संवादको सन्दर्भमा मैले माओलाई भने, “हामी तपाईँका असल छिमेकी हौं ।”
माओ, “नेपाल हाम्रो असल छिमेकी हो । कुनै पनि देश आकारमा सानो वा ठूलो हुन सक्ला तर सबै देशको सार्वभौम मूल्य मान्यता (शक्ति) समान हुन्छ, त्यसमा पनि मित्रताको सम्बन्ध ठूलो र सानो भन्ने हुँदैन, बराबर हुन्छ ।”
“नेपाल आकारमा तुलनात्मक रुपले सानो देश हो”, मैले भने ।
माओ, “हीरा सानो भए पनि ठूलो ढुङ्गा भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले चीनलाई गौतम बुद्ध दिएको छ । हामीले के दिएका छौं र ?”
“हाम्रा लागि चीनको साथ, सहयोग महत्त्वपूर्ण छ”, मैले जवाफ दिएँ ।
माओ, “तिब्बतसम्म रेल पु-याउने झन्डै ५० वर्षभन्दा बढी लाग्छ होला । त्यसपछि मात्र नेपाललाई सहयोग गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ ।”
चीनको प्रसङ्गमा संवाद गर्दा, चीनका लागि स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको शान्ति र विकास महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तिब्बतसँग सीमा जोडिएको छिमेकी नेपालमा चीनले कुनै राजनीतिक समस्या चाहँदैन । सँधै नेपाली जनताको निर्णयको कुरा गर्ने चीनले नेपालको हकमा सधैँ विजयी पक्षसँगै बस्न चाहने छ । चीनले तिब्बतमा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्रधानता दिनु स्वाभाविक हो । चीनका लागि नेपाली भू–भाग सामरिक क्षेत्र होइन । नेपाल यसरी नै भविष्यमा पनि असंलग्न रहोस् भन्ने चीनको चाहना हुनेछ ।
यहाँको धारणामा नेपालको राष्ट्रिय एकताको पहिलो ‘सूत्र’ केलाई मान्न सकिन्छ ?
भौगोलिक एकता, सांस्कृतिक एकता र भाषाको एकताले जाति बन्छ । यसै जातिको समूहले ‘सम्पर्क भाषा’ समेत प्राप्त गर्छ । प्रारम्भमा राज्य विस्तारमा शक्तिको प्रयोग हुन्छ तर स्थायी एकीकरणको लागि निश्चित भौगोलिक सीमा, जाति, संस्कृति र भाषा आवश्यक छ । नेपाल एकीकरण गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले गोरखाबाट राजधानी कान्तिपुरमा मात्र सारेनन्, राज्य गर्दा नेपाल (गोरखाली) सिञ्जाली खस भाषालाई ‘नेपाली’ समेत भने । अतः राष्ट्रिय एकताको पहिलो सूत्र स्वाभाविक रुपमा ‘भाषा’, ‘साहित्य’ र ‘संस्कृति’ लाई मान्न सकिन्छ ।
यहाँको कार्यकालमा सम्झना आइरहने कुनै एउटा राजनीतिक घटनाको स्मरण गर्नुहोस् ।
यस सम्बन्धमा एउटा घटना स्मरणीय छ । भूमिसुधार कार्यक्रम राजाबाट घोषणा हुने कि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र घोषणाबाट हुने भन्ने विवादमा केहीलाई छोडेर प्रायः अधिकांश उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञहरुले राजाबाट हुनु पर्नेछ भन्नेमा जोड दिए । तर मेरो अडान मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र घोषणाबाट भूमिसुधार हुनुपर्छ भन्ने थियो । यो विषयलाई लिएर डा. तुलसी गिरी र म बीच बाझाबाझ् भयो । यस प्रसङ्गमा मेरो धारणा थियो l ‘राजाको काम खोस्ने होइन, दिने भएकाले कसैको जग्गा खोस्ने काम राजाबाट नहोस् । मध्यम वर्गले नै खेती किसानी गर्ने र जग्गा कमाउने भएकाले यो देशका किसानहरुको इच्छा विपरित काम हुन गए भोलि राष्ट्रलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ ।’ यसरी मन्त्रिपरिषद्को बाझाबाझ् भएपछि राजाले घोषणा नगर्ने, मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गर्ने सहमति बनेको थियो । तर यो कार्यान्वयन हुन नसकेर म एक्लो भएपछि मैले स्वेच्छाले आफ्नो ओहोदाबाट राजीनामा दिएँ । यो देखेर राजा महेन्द्रले मलाई राजीनामा नगर्नू भनी सुझाएका थिए । राजा र सूर्यबहादुर थापाले मलाई अध्यक्ष हुन सक्ने सम्भावना देखाउँदै, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष डा.गिरीले राजीनामा गर्ने योजना सुनाए । तर मलाई मन्त्रिपरिषद्को स्वरुप नबदली अध्यक्ष मात्र बदलेर अहिले देखिएका राष्ट्रिय समस्याहरुको हल हुँदैन भन्ने मनमा लागिसकेकोले दरबारमा पुगेर मैले भने, सरकार ∕ मेरो राजीनामा स्वीकृत होस् । सरकारले बहुदल पनि कहिले बक्सने हो, थाहा छैन । बहुदल बक्सेपछि म आउँछु ।’ यसरी मैले लेखेको आफ्नो राजीनामा फिर्ता नलिइ, बुझाएको ५ दिनपछि वि.सं. २०२१ भदौ ६ मा राजदरबारले एक विज्ञप्ति जारी गरी ‘मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष तथा गृह पञ्चायत मन्त्री विश्वबन्धु थापाले घर व्यवहारको कारणवश बुझाउनु भएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।’ यसरी मेरो राजीनामा स्वीकृत भयो । कुनै राजनीतिक पात्र जनप्रिय बन्दै गएको कतिपय राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखलाई मन पर्दैनथ्यो । यस्तोखाले चलन नेपालमा मात्र होइन, अरु देशमा पनि थियो । कुनै समय फ्रान्समा एक जना प्रधानमन्त्री अत्यन्त जनप्रिय थिए । त्यहाँका राष्ट्रप्रमुखको वरिपरिका मानिसहरुले प्रधानमन्त्री फेर्न सुझाव दिए । तर राष्ट्रप्रमुखले प्रश्न गरे, ‘किन फेर्ने ? यो लोकप्रिय छ ।’ सुझाव दिनेहरुको तर्क हुन्थ्यो, ‘त्यही लोकप्रिय भएकैले त फेर्नुपर्छ’ ।
( नेपाल–चीन सम्बन्ध’ का विद्यावारिधि शोधार्थी तथा यस www.duniyakokhabar.com का स्तम्भकार शैलेन्द्र बहादुर थापाले नेपालका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं पुर्व गृहमन्त्री ९४ वर्षीय विश्वबन्धु थापासँग गर्नु भएको सम्वाद ।)